आज २०७८ कार्तिक ९ गते मंगलबारको राशिफल — Sanchar Kendra
आज २०७८ कार्तिक ९ गते मंगलबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
नजिकको व्यक्तिबाट धोका पाइन सक्नेछ । अभिभावकले स-साना त्रुटि औंल्याउँदा मन खिन्न हुनेछ । यात्रामा सावधानी अपनाउनु होला । खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ । अपराह्नपछिको समय तुलनात्मकरुपमा राम्रो देखिन्छ ।
आज दाजु भाइबाट सहयोग र ससुराली पक्षसंग सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ । कृषि कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । आफन्तसंग भेट घाट पनि हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ ।
विश्वासपात्रलाई वचन दिँदा संयम अपनाउनुहोला । मेहनतपूर्वक गरिएको काममा अपजस आइलाग्न सक्छ । बाहिरी खानपानमा ख्याल गर्नुपर्नेछ । कसैसँग कारोबार गर्दा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नूपर्ला ।
आज सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ । अन्योलका बीच उन्नतिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । वित्तीय संस्थाबाट सहयोग मिल्नेछ ।